I-model - Geofumadas
INFRAWEEK 2021 - diiwaangelintu way furan tahay
Diiwaangelintu hadda waxay u furan tahay INFRAWEEK Brazil 2021, Bentley Systems 'shirarka dalwaddii oo ay ka muuqan doonaan iskaashi istiraatiijiyadeed oo lala yeelanayo Microsoft iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha. dunida daboolida ". INFRAWEEK wuxuu dhashay ...
Baridda CAD / GIS, Microstation-Bentley
Howlaha daruuriga ah ee cusub ee loo yaqaan 'Twinwin Infrastructure Injineernimada'
Mataanaha dhijitaalka ah waxay galaan guud ahaan: shirkadaha injineernimada iyo milkiile-wadayaasha. Ku Dhigista Himilooyinka Mataanaha Dijitaalka ah ee SINGAPORE - Sannadka Kaabayaasha 2019 - Oktoobar 24, 2019 - Bentley Systems, Incorporated, bixiyaha caalamiga ah ee softiweer dhammaystiran iyo adeegyada daruuriga ah ee mataanaha dhijitaalka ah, ayaa soo bandhigay adeegyo daruur oo cusub ...
Waa maxay sababta loo isticmaalo laba mataano ah dhismaha
Wax kasta oo hareerahayagu ku socdaa waa kuwo dijitaal ah. Tikniyoolajiyadda horumarsan sida sirdoonka macmalka ah iyo Internetka Waxyaabaha (IoT) ayaa si isa soo taraysa u noqonaya qayb muhiim ah oo ka mid ah warshado kasta, taas oo ka dhigaysa habsocodyo dhaqso badan oo hufan marka loo eego qiimaha, waqtiga, iyo raad raaca. Tag digital ...
Waayo-aragnimada barashada iyo barista BIM ee ku-xirnaanshaha qiyaasta CAD
Waxaan fursad u helay inaan la falgalo Gabriela ugu yaraan saddex jeer. Midka koowaad, fasalladaas jaamacadda oo aan ugu dhowaanay kuliyadda kulliyadda injineernimada; ka dib fasalka wax ku oolka ah ee Farsamada Farsamada iyo ka dib mashruucii biyo xidheenka Rio Frío ee aagga Cuyamel, ee ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Microstation-Bentley
Kuwa ku guuleysta abaalmarinta “Sannadka Kaabayaasha”
Bentley Systems ayaa ku dhawaaqday mashaariicda kama dambaysta ah ee loogu talagalay abaalmarinta hal-abuurnimada ugu fiican ee isticmaalka xalka software-ka ee maareynta kaabayaasha. Waxaa jira 57 xubnood oo isugu soo haray, kana imanaya 420 magacaabis caalami ah dhacdadan 2018. Lambarada waa qabow laakiin waxay ka tarjumayaan sababta sanadkii hore u ahaa Singapore, xarunta ...
Ku Xidhaan Khariidad Gaar ahaan Khariidadda Wanaagsan ee Microstation
Microstation ee kuxiran 'CONNECT Edition', cusbooneysiintiisa 7 waxay kicisay suurtagalnimada isticmaalka Khariidadda Bing sida lakabka adeegga muuqaalka. In kasta oo ay suurtagal ahayd ka hor, haddana waxay qaadatay furaha cusboonaysiinta ee Microsoft Bing; laakiin sida aad dib u xusuusan karto, Microsoft hadda waa lamaanaha koowaad ee Bentley ee Isbahaysiga Pavilion…
diiwaanka Land ee macnaha guud ee System transactional Qaranka
Maalin kasta waddamadu waxay diiradda saaraan isbeddellada elektaroonigga ah, halkaasoo hababka loo fududeeyo raadinta bixinta adeeg wanaagsan oo loogu talagalay muwaadiniinta, iyo sidoo kale yareynta xadadka musuqmaasuqa ama xafiis-siyaasadeed aan loo baahnayn. Waxaan ka warqabnaa in sharciga, hay'adaha iyo geeddi-socodka la xiriira hantida waddan kasta uu yahay ...
cadastre, Featured, Geospatial - GIS, egeomates My
shahaadada Cadastral ka ah CAD / GIS iswada
Bixinta shahaadada hantida waqtiga ugu habboon waxay muhiim u tahay bixinta adeegyada aagga Cadastre, waa la farsameyn karaa iyada oo aan dadaal badan la helin, hubinta waxtarka iyo yareynta khaladaadka aadanaha. Qaabkii hore, markii aan la shaqeynay dowladaha hoose, markii isticmaale uu codsado cabir iyo shahaadada cadastral, shaqada nuskeed waxay ahayd ...
Shirka Infrastructure 2014: Waxyaalaha loo yaqaan 'Hispanics'
Toddobaadkii hore Shirkii Kaabayaasha Dhaqaalaha ee 2014 ayaa lagu qabtay, mar kale London, kaas oo abaalmarinta loo yaqaan 'In Inspired' sidoo kale lagu qabto. Munaasabadan ayaa aad uga abaabul badneyd munaasabadaha kale, barnaamijka mobilada ee ay ugu talagaleen iOS iyo Android ayaa ugu fiicnaa; oo leh cusbooneysiin, ...
Microstation-Bentley, Leisure / waxyi
Bentley ProjectWise, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la ogaado
Bentley wax soo saarkooda ugu caansan waa Microstation, iyo noocyadiisa toosan ee laamaha kala duwan ee juqraa-injineernimada iyadoo xoogga la saarayo naqshadeynta injineernimada madaniga, warshadaha, dhismaha iyo gaadiidka. ProjectWise waa badeecada labaad ee Bentley ee isku dhafan maareynta macluumaadka iyo isku dhafka kooxda shaqada; dhawaana la sii daayay ...
Engineering, Microstation-Bentley, aragti ugu horeysay
Fahamka fikradda BIM, in ay dhacdo Systems Bentley
Erayada la fududeeyay, BIM (Dhismaha Macluumaadka Dhismaha) waa isbadalka fikrad dhaqameed la yiraahdo CAD (Naqshadeynta Kumbuyuutarka) iyo in kastoo ay jiraan buugaag dhan oo lagu qoray tan kadib markii Jerry Laiserin uu ereyga ku faafiyay, ujeedooyin waxbarasho waxaan isku dayi doonaa inaan noqono sida ugu fudud ee suurtogalka ah Kahor, markii la dhisayay dhisme, naqshadeeyaha ka dib wadajir wanaagsan ...
Featured, tabo cusub, Microstation-Bentley
Mid ka mid ah habeenkii ee abaalmarinta ka mid ah la waxyoonay
Blogsy waa aalad layaableh, ilaa hadda tan ugu fiican ee wax lagu qoro ipad. Mudaharaad ahaan, waxaan ugu talo galay inaan ku cusbooneysiiyo maqaalkan sida abaalmarinta loo bixinayo. Waxaan jeclaan lahaa inaan raaco martida la nool Woopra, laakiin qoraalkeedu aad ayuu u culus yahay oo wuxuu ku tuuray goobta dhowr jeer, waa ...
Bentley I-model, isdhexgalka iyada oo loo marayo ODBC
I-model waa soo jeedinta Bentley ee ah in la soo bandhigo muuqaalka feylasha dgn, iyadoo ay suurta gal tahay falanqaynta, la talinta iyo muujinta xml gundhigga ah. In kasta oo ay jiraan waxyaabo la socda si ay ula falgalaan AutoDesk Revit iyo iPad, laga yaabee shaqooyinka loo abuuray akhristayaasha pdf iyo Windows 7 sahmiye ayaa aad uga muuqda tan ...